Qalabka wax lagu shiido dheemanta birta, Pads dheemanta xabagta xabagta - Dheeman ZL
Dhuxul qoyan oo Dheeman suuf ah
Dhuxul-dheeman dheemanka ah ee qallalan
Dhammaan noocyada kala duwan ee saxannada shiidi dheeman, waxaa lagu dhejin karaa ilaa tiro balaadhan oo ah Furimaha Dagaalka dabaqa via xiriiro kala duwan.
Khad buuxa oo suuf dheeman ah oo bir ah oo ay ku jiraan suufka resin qoyan iyo qalalan, suufka kala-guurka ah, suufka dhalaalka gees iyo gees iwm.
PCD-yada ka saarista dahaarka;Dubeyaasha Bushka ee abuurista qurxinta ama dhammayn la'aanta sagxadaha shubka ah marka laga reebo saarista dahaarka.
Taayirrada koobka lagu dhejiyay furimaha xagasha ee diyaarinta dusha sare;shiida giraangiraha ee shiida shiidiyaasha sida Blastrac, Klindex iwm.
Z-LION 16KP xabagta dheemanka resin ee loogu talagalay isbahaysiga dhalaalaya
Z-LION oo labanlaab ah naxashka qayb trapezoid shub ah ...
Qalabka wax lagu shiido PCD ee dhulka Lavina gri...
Z-LION suufka daahsoon ee shubka ah ee shatiga leh ee qoyan
Redi Lock resin pad ee dabaqa Husqvarna ...
19+ sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan Soo-saarka Aaladaha Dheeman;
63 ee shatiyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah;
5 Qaybta Qorista Heerka Warshadaha;
100+ bandhigyo adduunka oo dhan;
20+ Mashaariic OEM ah oo ka yimid Hogaamiyaasha Warshadaha.
Ku raaxayso gaarsiintayada degdega ah
Kaliya alaab tayo leh
Had iyo jeer masuul ka noqo alaabtayada
fadlan fariin noogu dhaaf waxaan kula xiriiri doonaa 24 saac gudahood.
Koodhka kaydka: 831862
Abriil 27, 2022